People - ewa.mg
Fanentanana sy zavakanto: nodimandry i Danny Rabemananjara
Mpanentana fandaharana tany amin’ny Radio, teny an-tsehatra, tany anivona lanonana… Namoron-kira, nihira, nitendry zavamaneno… Tsy ho tazana sy tsy ho re intsony izany rehetra izany. Nindaosin’ny fahafatesana i Danny Rabemananjara.Nangina tanteraka ilay feo tsy zovina amin’ny Ma­lagasy maro! Nodi­man­dry teo amin’ny faha-70 taonany, ny alin’ny 24 jolay hifoha ny 25 jolay i Danny Rabema­nanjara. Mpanentana fandaharana nanana ny nampiavaka azy tokoa. “Dany a, ô ô ô Dany a!” io ilay hira famantarana rehefa izy no hanentana tao amin’ny Radiom-pirenena malagasy (RNM), tany ho any amin’ny taona 1980 – 2000. Tafi­ditra tao anatin’izay fahaizany manentana izay, noforoniny ny “Ampi­tampitao”. “Nanova fandaharana izahay tamin’izany. Natolo­tr’i Danny Rabemanan­jara ny tale Jean Claude Andrianaivo sy ny mpiara-miasa rehetra ny heviny ny amin’ity fandaharana vaovao “Ampitampitao” ity. Raikitra fa hotanterahina izany ka tsy asiana resaka politika mihitsy fa sosialy (fiainam-bahoaka) sy kolontsaina ranoiray ny vaovao ampitaina ao anatiny”, hoy i Harizaka Rasolo, niara-niasa akaiky tamin’i Danny Rabe­mananjara. Tsy tao amin’ny toeram-piasana tao Anosy ihany no nanehoan’i Danny Rabemananjara ny fahaizany manentana fa teny an-tsehatra ihany koa. “Rehefa manao ny “décentralisation” na ny fanapariahana ny fampitana mivantana ny RNM izahay, izy no miantsoroka ny fanentanana teny an-tsehatra, mialohan’ny hanombohan’ny fandaharana”, hoy hatrany i Harizaka Rasolo. Nambaran’ity mpiara-miasa taminy ity ihany koa fa “tao amin’ny « Centre programmation » hatrany i Danny no niasa ka anisan’ny fandaharana nosahaniny ihany koa ny “Asa tanana malagasy””. Notezain’ny zavakanto… Tsy mba mety tezitra“… Faran’izay mahay mi­fandray aman’olona i Danny. Hainy sy vitany tsara avokoa izay andraikitra niantsorohany. Na nisy aza ny fotoana nandalovan’ny hatezerana teo amin’ny mpiara-miasa rehetra, i Danny tsy mba tao anatin’izany. Tsy mba mety tezitra izy. Raha izaho manokana, tsy mbola nahita an’i Danny tezitra izany”, hoy i Harizaka Rasolo. Nanana tarika mpampandihy sy mpanentana amina lanonana samihafa ihany koa i Danny Rabemananjara. Sady namoron-kira no mpitendry zavamaneno ary mihira rahateo izy. Ankoatra ireo, anisan’ireo nanandratra ny kolontsaina malagasy tamin’ny alalan’ny kabary i Danny. “Namorona hira maro izy, iray amin’ireny ny “Dada”, izay tena nampihetsi-po olona maro tokoa ny nandre azy isaky ny alefan’ny RNM ilay hira. Raha ny nambarany taminay, hira noforoniny tamin’ny rainy maty izy io”, hoy hatrany i Harizaka. Fantatra fa anisan’ny mahafinaritra an’ity andrarezin’ny fanentanana sy ny kolontsaina malagasy ity ihany koa ny mifampizatra traikefa amin’ireo tanora, na teo anivon’ny asa izany na teo amin’ny tontolon’ny hira sy ny kabary. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana sy ny tontolon’ny zavakanto ny Gazety Taratra.HaRy RazafindrakotoL’article Fanentanana sy zavakanto: nodimandry i Danny Rabemananjara a été récupéré chez Newsmada.
Fifaninanana andriambavilanitra :: Voahosotra ho “Miss Madagascar 2020” i Anjaratiana Nellie
Fihanaky ny valanaretina : voan’ny covid-19 koa ny minisitra teo aloha, Rasoloelison Lanto
Hatsaran-tarehy :: Tovovavy fito hiady ny Miss Madagascar
News - People - Politique - News Mada
Rabary Paul : “Lasa tsy maheno ny sofiko noho ny Covid-19”
Nizara amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy ny niainany ny tsimokaretina Covid-19 Ra­bary Paul, ao anatin’ny andro faha-20 nitsaboany tena. Nam­barany fa ady mafy sy sarotra saika namoizany ny ainy ny natrehiny tao anatin’izany fo­toana izany. Nitondra takaitra ny tenany vokatry ny valanaretina satria tsy maheno intsony ny sofiny iray. Namela takaitra amin’ny avokavony koa ny aretina fa mila fikarakarana ma­nokana, araka ny nambarany.Nisaotra manokana ny mpiasan’ny fahasalamana ni­karakara ny marary rehetra ao anatin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 ity tomponandraikitra ambony teo aloha ity ary nanentana ny fanjakana hijery manokana azy ireo amin’ny fampitaovana. Ireo mpiasan’ny fahasalamana no lohalaharana ao anatin’ny ady ary miasa andro sy alina.VonjyL’article Rabary Paul : “Lasa tsy maheno ny sofiko noho ny Covid-19” a été récupéré chez Newsmada.
Fahafatesana mpanakanto :: Nodimandry Madame Zo, ilay mpanenona malaza
Misaona indray ny zavakanto malagasy. Nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-64 taonany, afak’omaly alina, Razakaratrimo Zoarinivo, fantatry ny rehetra amin’ny solon’anarana hoe Madame Zo. Mpanakanto manana aingam-pamoronana miavaka izy sady efa nandrombaka ny am-boaran’ny andiany fahefatra an’ny fifaninanana zavakanto « Paritana », tamin’ny volana jona lasa teo. Ireo tenona raitra no tena nahafantarana azy sy manamarika ny fisiany teo amin’ny tontolon’ny hairaha araka endrika amam-bika. Tamin’ny taona 1985 no nidiran’i Madame Zo teo amin’ny tontolon’ny tenona. Lasa mpanofana, taorian’izay. Nikaroka famoronana manaraka vanim-potoana ny tenany, izay niavahany ary nitondrany ny kanto malagasy tany amin’ny firenena maro. «Toy ny fiteny iray hahafahako maneho ny kanto voiziko izany famoronako izany. Hita eny rehetra eny ireo akora ampiasaiko saingy tsy misy mahatsikaritra. Mahazo fiainam-baovao sy ainga vao izy ireo eo ambonin’ireo tabilao atolotro », hoy ny fanazavany ny asam-pamoronany, fony fahavelony. Nanampikasana hanatanteraka fampirantiana any amin’ny « Cité des arts», any Paris (Frantsa) Madame Zo, saingy hafa ny fandaharana. Hanomana fahatsiarovana manetriketrika ho azy, arahina fampirantiana goavana aorian’izao fihibohana izao ny Fondation H, isan’ny mikarakara ny fifaninanana Paritana. L’article Fahafatesana mpanakanto :: Nodimandry Madame Zo, ilay mpanenona malaza est apparu en premier sur AoRaha.
News - People - News Mada
Haikanton’ny ankehitriny: nodimandry Razakaratrimo Zoarinivo (Mme Zo)
Nivelatra teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny talentany. Niavaka rahateo ny kanton’ny ankehitriny natolotr’i Mme Zo ny olona. Nitsahatra nanomboka omaly avokoa izany satria…Nodimandry ilay andrarezin’ny haikanton’ny ankehitriny. Vaovao nampitain’ny tambajotran-tserasera maro, omaly, ny nahafantarana fa nindaosin’ny fahafatesana i madame Zo na Razakaratrimo Zoarinivo. Tsy ela fa vao tamin’ny volana jona teo ny nanoloran’ny Fondation H azy ny loka “Prix Paritana” andiany faha-4. Talenta lehibe ananany ny famoahana ny hairahan’ny ankehitriny amin’ireo akora heverina fa tsy hisy ampiasana azy intsony. Saika manana endrika valonana lehibe, na misarina tady voatenona izy ireny amin’ny ankapobeny. Ho an’i madame Zo: “tsy misy ny zavatra tokony ho very. Ny rehetra, azo avadika ho tsara avokoa”. Fomba fiasa nitandro fatratra ny tontolo iainana sy ny fahadiovana sady nampifamatotra ny fahaiza-manao fahiny sy ny asa famoronana ankehitriny. Niara-niasa akaiky amin’ireo mpitia sy mpandala zavakanto izy. Anisan’izany ny Fondationa H izay nanome toky fa tsy atao raraka an-tany ny ezaka sy ny talentan’i madame Zo fa hokajina fatratra, omena lanja sy hasina ary hampiainina hatrany hatrany na tsy eo intsony azy izy.Mahahenika ny sehatra iraisam-pirenenaTsy teto Madagasikara ihany fa saika naneran-tany, samy nahita ny hakanton’ny fikarohana nataon’i Mme Zo avokoa. Anisan’ny lehibe indrindra ny nampirantiana ny sanganasany tao amin ‘ny Musée Quai Branly, ny taona 2018 ka hatramin’ny taona 2019, nandritra ny hetsika: “Madagascar, arts de la Grande Île”. Talohan’izay, ny taona 2007, tamin’ny « Triennale de la Tapisserie » notontosaina tany Pologne. Nandraisany anjara ka nampirantiana ny sanganasany ihany koa ny tao amin’ny « National Muséum of African Art » ao Washington DC, ny taona 2004. Mbola voarakitra tsara ao anaty tantara koa ireo sanganasany naranty nandritra ny “Biennale de Dak’Art », ny taona 2000 sy ny taona 2002. Ho an’ity taona ity, anisan’ny tafiditra ao anatin’ny loka azon’i Mme Zo ny fandraisana anjara amin’ny fihaonana sy ny fikarohana any amin’ny Cité Internationale des Arts, mandritra ny telo volana. Aorian’izay no tokony ho nampirantiany ny sanganasa vitany tao anatin’io fikarohana sy famoronana io.Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana sy ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny Gazety Taratra.Nanangona: HaRy RazafindrakotoL’article Haikanton’ny ankehitriny: nodimandry Razakaratrimo Zoarinivo (Mme Zo) a été récupéré chez Newsmada.
Mode - News - People - Delire Madagascar
Efa voafaritra ny daty. Noho ny zava-misy ankehitriny, nanapa-kevitra ny komity nasionaly misahana ny Miss Madagascar (CNMM) fa hizara roa ny dingan’ny famaranana hifidianana ny Miss Madagascar taorian’ny fandinihana ny fomba rehetra azo atao. Atao amin’ny alalan’ny fandefasana horonantsary amin’ny aterneto (amin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera sosoialy) ny dingana manasa-dalana. Ny 01 jolay 2020 no nanomboka izany ary tsy hifarana izany raha tsy ny 08 jolay 2020. Nisy fandefasana horonantsary novokaran’ireo mpifaninana izay narahina toromarika avy amin’ny komity. Ahitana ireo mpifaninana mampiseho ny fitafy ara-drazana sy fianjaika an-drenivohitra io horonantsary io ary hahazoana naoty. Ny 17 jolay 2020 manomboka amin’ny 12 ora atoandro, eny amin’ny Arena Ivandry kosa ny famaranana lehibe no ho tanterahana. Araka ny fanzavan’ny komity fa 17 ny isan’ireo mpifaninana handray anjara amin’ny Miss Madagascar 2020. Nahitana solontena avy ny faritra: Vatovavy Fitovinany, Anosy, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Vakinankaratra, Diana, Ihorombe, Sofia, Analanjirofo, Boeny, Atsimo Andrefana, Analamanga, Sava, Betsiboka, Menabe, Atsinanana ary miampy Miss Diaspora iray. Na dia nisy aza ny fiovan’ireo dingana dia notazomina ihany ireo fanapahan-kevitra sy fandamanina ka nandefasana “lamba fisalotra”, fitafy fianjaika an-drenivohitra sy entina eny amoron-dranomasina ary karazana kojakoja ilaina amin’ny endrika sy taovolo avy amin’ny Vero Vero ny mpifaninana tsirairay avy. Vola mitentina 100.000 Arary kosa no nomena azy ireo amin’ny famokarana ny horonantsary ho alefa amin’ny aterneto. Nirina R. Cet article MISS MADAGASCAR 2020: Ho tanterahana amin’ity volana jolay ity ny famaranana lehibe est apparu en premier sur déliremadagascar.
Covid-19: miandry ny valin’ny fitiliana farany i Tence Mena
Telopolo andro teo ho eo ny nanarahan’i Tence Mena fitsaboana miaraka amin’ny fihibohana… Fanintsiviny izay ny nanaovan’ny mpitsabo ny fitsapana na « test » momba ny toe-pahasalamany raha toa ka ahitana ny viriosy Covid-19 na tsia. Raha ny vaovao mivoaka sy tazana any anaty tambajotran-tserasera samihafa, taorian’ny fisotroany ny tambavy Covid organics tao anatin’ny herinandro, nihatsara tanteraka ny fahasalamany. Anisan’ireo fepetra takina amin’ny marary tsirairay anefa ny fanatanterahana fitsapana na “test” indroa misesy ka raha miiba (négatif) ny valiny azo avy amin‘izany izay vao azo lazaina ho sitrana tanteraka ilay olona.Raha ny vaovao sy ny fampahafantarana voalaza any anaty tambanjotran-tserasera, ny 26 avrily teo, “négatif” na miiba ny fitsapana faha-9 natao amin’i Tence Mena. Noho izany, miandry ny valin’ny fitsapana faha-10 izany ny rehetra. Afaka 48 ora taorian’ny nanaovana ny “test” no mivoaka ny valiny. Nambaran’ity mpanakanto manana ny maha izy azy ity fa “mino sy manantena aho fa ho “négatif” io “test” farany io… Mba ho afaka hamonjy ny trano fonenako amin’izay aho…”.Marobe ireo mpiserasera any anatin’ireny tambajotra ireny ny mirary fahasalamana tanteraka ho an’i Tence Mena. Toraka izany koa ny Gazety Taratra!HaRy RazafindrakotoL’article Covid-19: miandry ny valin’ny fitiliana farany i Tence Mena a été récupéré chez Newsmada.
The Voice – Horaikitra ve ny famaranana? hiatrika ny dingan’ny « KO » i LudySoa sy i Nathan
Efa lalan-davitra no nizoran’izy mianadahy tao anatin’ny andro maro! Nahazo sitraka tamin’ireo mpitsara hatrany ny feomangan’i LudySoa sy i Nathan, nandritra izay nisehoany teny an-tsehatra ao anatin’ny fifaninanana “The Voice” tontosaina any Frantsa izay. Anio alina, hiroso amin’ny dingana nampitondraina ny lohateny “KO” izy ireo. Dingana tsy mora ny hiatrehana azy satria azo lazaina fa sangany matoa tonga eo aminy. Tsy azo hamaivanina rahateo ireo mpifaninana.Raha ny fandaharam-potoana napetraky ny mpikarakara hatrany am-boalohany, tafakatra avy hatrany eo amin’ny dingan’ny manasa-dalana ny mpifaninana mendrika amin’ity dingan’ny “KO” ity. Ny 2 mey izao no tokony hanatanterahana io dingana manasa-dalana io. Efa nomanina ihany koa ny toerana toy ny Lapan’ny fanatanjahantena ao Paris, handraisana izany. Mbola miankina indrindra amin’ny mety ho fivoaran’ny valanaretina coronavirus any an-toerana ny ho fizotran’ny fifaninanana The Voice, manomboka eo amin’io dingan’ny manasa-dalana io. Toraka izany ihany koa ny dingan’ny famaranana izay kasain’ny tompon’andraikitra hotanterahina ny 9 mey izao. Ho raikitra ve sa tsia? HaRy RazafindrakotoL’article The Voice – Horaikitra ve ny famaranana? hiatrika ny dingan’ny « KO » i LudySoa sy i Nathan a été récupéré chez Newsmada.
Laza avy any ampita
Mpanakanto malaza maneran-tany i Madonna. Tsy ny hirany ihany anefa no iresahan’ny olona sy ny fampahalalam-baovao mahakasika azy fa ny fihetsiny. Fantatra izao, ohatra, fa tsy avelany hitondra finday ireo hijery ny fampisehoany any Paris, mandritra ilay fitetezam-paritra « Madame X tour », ny 18 febroary hatramin’ny 4 mars 2020. Heverin’ny mpampahalala vaovao fa mety ho lasa fepetra iraisan’ny mpanakanto malaza mihitsy ity resaka finday ity, satria efa nanao toy izany koa ry Rihanna sy ry Ariana Grande. Raha mbola mpijery fahitalavitra, indrindra raha tanora, angamba tsy misy tsy mahalala ilay andian-tantara na « série » mitondra ny lohateny hoe « Friends », izay vokarin’ny Warner Bros. Anisan’ny hita foana ao anatin’ity tantara ity, ankoatra ireo mpilalao, ny toerana antsoina hoe Central Perk sy ilay sezalava na « canapé » miloko vonimboasary, fipetrahan’izy ireo. Ho fahatsiarovana ny 25 taona nisian’ity tantara ity àry, hanome fahafaham-po ny mpankafy ny mpamokatra ka firenena maro no asiana an’io Central Perk miaraka amin’ny « canapé » io. Anisan’izany ny ao Paris, izay hotokanana rahampitso.L’article Laza avy any ampita a été récupéré chez Newsmada.
c 17 juillet 2019
People - Jejoo
“Thank U, Next” hiran’i Ariana Grande vao nivoaka efa maro mpijery ao amin’i Youtube
Nanamarika ny tantaran’i “youtube” indray ny hiran’i Ariana Grande. Vao nivoaka mantsy ilay hirany “Thank U, Next”, ny zoma 7 desambra lasa teo, dia efa maherin’ny 50 tapitrisa ny nijery izany, tao anatin’ny 24 ora monja. Ity hira ity indray no nandresy ny raki-tsary be mpijery indrindra tao anatin’ny 24 ora satria ilay tarika koreana BTS no nahazo izany toerana izany, tamin’ny volana aogositra lasa teo. Andro vitsy monja taty aorian’ny nivoahany dia efa maherin’ny 125 tapitrisa izao no nijery io hiran’i Ariana Grande io. Nangonin’i Rinahsoa Cet article a été récupéré chez Jejoo
Amidin’i Rihanna ny tranony ao Kalifornia
Enim-bolana taty aorian’ny nandrobana azy dia amidin’i Rihanna ilay tranony ao Kalifornia. Alefany 7,4 tapitrisa dolara izany trano izay novidiany 6,4 tapitrisa dolara izany. Mirefy 700m2 moa io trano io ka ahitana efitra 6, efitra fandroana 10 ary misy efitrano fijerena horonan-tsary, fanaovana fanatanjahan-tena sy billard. Raha tsiahivina dia mpankafy iray antsoina hoe Eduardo Leon no tratra ka nanaovana fanadihadiana rehefa tafiditra tao amin’io tranon’i Rihanna io. Nijanona 12 ora tao amin’io trano io ity lehilahy ity mandra-pahatonga an’i Rihanna. Nangonin’i Rinahsoa Cet article a été récupéré chez Jejoo
News - People - Jejoo
Hita nandehandeha teny amin’ny lalan’i Londres ny printsy Harry sy Meghan Markle
Tamin’ny volana aogositra lasa teo no nahitana mpivady mitovy amin’ny printsy Harry sy Meghan Markle, nandehandeha teny amin’ny lalan’i Londres teny. Maska ihany nefa no nanaovan’ireo mpivady ireo fa tsy tena ny printsy Harry sy ny Meghan Markle akory ireo. Tazana indray ireo mpivady ireo, ny alarobia lasa teo, niantsena tao amin’ny Galeries Lafayette ao Berlin ary bevohoka ilay vehivavy. Ny mozea “Madame Tussauds” ao Berlin moa no nahita izao hevitra izao mba ahafahan’ireo mpandalo mifanena amin’ireto mpifankatia malaza ireto. Nangonin’i Rinahsoa Cet article a été récupéré chez Jejoo
FAMARANANA NY TAONA :: Hanao seho faradoboka etsy amin’ny Dôme RTA ry Samoëla
Fety sy korana be anisan’ny hiavaka tokoa fampisehoana miandry ireo mpankafy mozika, etsy amin’ny Dôme RTA Ankorondrano, amin’ny zoma 14 desambra izao. Hanolotra seho kanto sy raitra eny an-toerana mantsy i Samoëla sy ireo namany, manomboka amin’ny 8 ora alina. Hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin’ny famaranan-dry “Bandy akama” ny taona ihany koa. Fampise­hoana feno, natao ho an’ireo niandry ny seho goavana tamin’ity taona ity izany, raha ny fanazavana. Haka endrika famintinana ireo rakikira sy vokatra navoakan’i Samoëla tao anatin’ny iraika amby roapolo taona nitrandrahany ny vazo miteny ny fiarahana. Hitamberina ao indray ireo hira nanamarika ny niandohan’ity mpanakanto ity, izay voarakitra tao anatin’ny rakikira «Mampirevy». Anisan’ ireny ny «Havako mamomamo », «Sexy girl», «Tsy zakan’ny tsena», « Soly» sy ireo maro hafa . Holalovana avy eo ireo hira ao anatin’ny « Manatosaka », « Efa sy 5 », « Ty », « Efa sy 10 », «Zana-bahoaka» sy ny « Maha­domelina », izay nivoaka faramparany. Tsy lany akory ny hira vaovao ary misy santionany zarain’i Samoëla hatrany isaky ny manao fampisehoana izy saingy andrasan’ny mpankafy foana ireo hira tsy lefy laza. Hetahetan’ny maro koa ny handaharany ireo vazo hita ao anatin’ny “Radio-N’ambanivolo”, vao nivoaka tamin’ity taona ity. L’article FAMARANANA NY TAONA :: Hanao seho faradoboka etsy amin’ny Dôme RTA ry Samoëla est apparu en premier sur AoRaha.
Natao mariazy tany Inde tamin’ny 5 desambra lasa teo i Nick Jonas sy ilay mpilalao sarimihetsika Priyanka Chopra
Natao mariazy tany Inde tamin’ny 5 desambra lasa teo i Nick Jonas sy ilay mpilalao sarimihetsika Priyanka Chopra Natambatra tao anatin’ny fanamasinana ny fomba Indiana sy amerikanina ka lanonana goavam-be no nanaraka izany. Samy manaja ny fombafomba avy amin’ny firenena avy rahateo izy roa ireto sy ny fianakaviany. Nizara sary marobe tao anaty kaontin’izy ireo “Instagram” izy roa ka hafatra tsotra: “ ilay andro tsara indrindra teo amin’ny fiainako” no nampiarahin’i Nick Jonas ireo sary ireo. Nangonin’i Rinahsoa Cet article a été récupéré chez Jejoo
Foot - People - Sport
Mbappé : “Misy zavatra tsy ampy aty amiko mba ahafahako mijery ireo Ballons d’or imaso imaso”
Ilay mpilalao baolina kitra frantsay Mbappé dia diso fanantenana tamin'ny maha faha efatra azy tamin'ireo mpifaninana tamin'ilay ambora "ballons d'or 2018" na dia fantany ihany aza ny ezaka efa vitany. Ilay mpanafika ao amin'i PSG, izay tompondaka erantany niarka tamin'ny ekipam-pirenena Frantsay farany teo dia nitafatafa tao amin'ny fahitalavitra l'Equipe. Niaraka tamin'ny amboaran'ny "Kopa" izay valim-pankasitrahana ho an'ny kintan'ny mpilalao latsaka ny 21 taona izy tamin'io fotoana io. Faha efatra izy tamin'ity indray mitoraka ity tamin'ny fifaninana Ballon d'or izy amboara tena tsiriritin'ny mpilalao baolina kitra rehetra. I Antoine Griezmann no teo alohany tamin'io fifaninanana io. Hoy i Kylian Mbappé hoe : "Ny amboaran'ny Kopa (Tanora mendrika) dia manaporofo fa nanao ny asany izaho. Eny misy ny fahadisoam-panantenana satria mpifaninana ny tenako. Fa miaraka amin'izay koa dia tsy misy ny fahadisoam-panantenana. Na dia efa maro aza ireo ezaka izay nataoko, dia mbola misy zavatra tsy ampy avy aty amiko ahafahako mijery imaso imaso an'ireo efa nahazo ny amboaran'ny Ballons d'or. Ny baolina kitra dia pitsopitsony. Nisy mihitsy ny lalao izay nataoko izay tsy nety. Afaka hatsaraiko ny fahombiazako. Afaka ny mbola manao tsaratsara kokoa aho. Fa na izany na tsy izany aza dia aleo nahazo ny tompondaka eran-tany tsy ankisalasalana. Ny fahaiza-miaraka no hitondra ahy hiverina eto. Raha irery dia tsy mahavita n'inon'inona. Mahafinaritra ny nahazoan'ny mpilalao eo afovoan'ny kianja ny loka (raha milaza ny fahazoan'i Modric ny Ballons d'or i Mbappé). Mino aho fa mbola hifoha ireo andrarezina roa (messi sy i Ronaldo) amin'ny taona ho avy." Marihana etoana fa i Kylian Mbappé dia nahazo ny loka voalohany tamin'ny amboara Kopa, izay manambara ny tanora mendrika indrindra tamin'ny taona 2018. Cet article a été tiré de : http://www.leparisien.fr/sports/football/mbappe-il-me-manque-des-choses-pour-regarder-les-autres-ballons-d-or-dans-les-yeux-03-12-2018-7960209.php
Cinéma - People
Eva Longoria : fibatana fonjam-by, fanatanjahan-tena, sakafo … te hiverina amin’ny bikany taloha izy
Fito volana taorinanan'ny nahaterahan'i Santiago, Eva Longoria dia efa nihena taorinan'ny nitondrany vohoka. Fa ilay "ex-star" an'i "Desperate Housewives" dia tsy hijanona eo fa mbola hanohy ny fihenany mandrapahitany an'ilay bika manify talohan'ny nitondrany vohoka. Ilay mpilalao sary mihetsika, izay efa nanomboka niasa, dia nikotrana mafy. Tao amin'ny pejin'i US Weekly no nanaovan'i Eva Longoria fanambarana ny amin'ny fianany vaovao, niteny izy tao hoe, izy izay efa 43 taona dia efa reny. Io zaza io dia vokatry ny fanambadiany niaraka tamin'ilay mpandraharaha mexikana José Baston ary izay hanokanany ny ampahany lehibe amin'ny fotoanany. Hoy i Eva Longoria hoe "Izaho dia nanome fotoana maro ho an'ny vatako mba haka ny toerany rehefa avy teraka aho. Ankehitriny dia manao fanatanjahan-tena mafy aho ary manaramaso tsara ny zavatra ho haniko izaho. Vao manomboka izaho izao. Tsy maniry ny hikotrana mafy be loatra aho anefa mba hiverenan'ny bikako." Eva Longoria dia nitandrina foana ny bikany, ny mpankafy an'i Desperate Housewives dia mahatadidy tsara an'ilay vatana manifinify rehefa nilalao an'i Gabrielle izy. Ilay kintan'i Desperate Housewives dia manao yoga, ny "pilates" ary ny hazakazaka. Niteny ihany koa izy fa manao fibatana fonjam-by tena matotra izy. Raha maka milamina amin'ny fanariana kilao mihaotra aza i Eva Longoria dia mihezaka ny maka fotoana arak'izay azo atao anefa ity farany ho an'ny zanany Santiago. Ao amin'ny tambazotra Instagram, dia mandefa sary matetika izy miaraka amin'ny zanany lahy. Ny farany izay hita ao dia izy miara-matory amin'ny zananay. Fotoana iray ho an'ilay mpilalao sarimihetsika izay efa nanomboka ny asany ary andrasana ho "guest" ao amin'ilay série Grand Hotel (coproductrice exécutive izy amin'io série io) sy ao amin'ny "Dora l'exploratrice" izay horonantsary nalaina avy amin'ilay sarimiaina "Dora l'exploratrice". Cet article a été tiré de http://www.purepeople.com/article/eva-longoria-musculation-sport-nourriture-elle-veut-retrouver-la-ligne_a315650/1
Nandeha ny sion-dresaka fa nisaraka i Rihanna sy ilay olon-tiany miliaridera, Hassan Jameel.
Ny talata lasa teo nefa no nahitana azy ireo niara-nisakafo tao amin’ny hotely Giorgio Baldi ao Santa Monica, any Kalifornia. Miezaka miafina ireo mpanenjika vaovao mihitsy izy roa ireto ka efa elaela tsy nahitana azy ireo niaraka. Izany no nahatonga ny tsaho hiely fa nisaraka angamba izy ireo. Nivady ilay mpamokatra horonantsary Quentin Tarantino sy ilay mpilatro Danniella Pick, olon-tiany. Fianakaviana sy namana akaiky ihany no nasaina nandritra ny lanonana notanterahina ny alarobia alina lasa teo, tao Los Angeles. Valo taona talohan’izao moa no nifanenan’izy roa ireto, tamin’ny fotoana nampahafantarana ilay horonan-tsary “Inglourious Basterds”. Ny taona 2017 kosa izy ireo no nifamofo ary izao niroso tamin’ny mariazy izao. Efa niandry nandritra ny 20 minitra ireo mpankafy an’i Elton John tao amin’ny Amway Center, tao Florida. Nieritreritra ireto mpankafy ireto fa tara fotsiny ity mpanakanto ity, amin’ilay seho ho tanterahiny. Gaga nefa izy ireo raha nahafantatra, tamin’ny alalan’ny tambazotra sosialy “Twitter” fa tena tsy ho avy mihitsy i Elton John. Nilaza ireo mpikarakara fa vokatry ny aretin’ny sofina nahazo an’i Elton John dia voatery tsy maintsy ho foanana ny seho ary mbola tsy fantatra ny daty hiverenany an-tsehatra indray. Mpijery nahatratra 20.000 no tezitra mafy, ary nizara izany tany anaty tambazotra sosialy ihany koa satria efa nilahatra nandritra ny ora roa, mialohan’ny seho. Mbola ho azo ampiasaina kosa ireo tapakila rehefa averina ilay seho, araka ny hafatra nomen’ireo mpikarakara Nampahafantarina tamim-pomba ofisialy ny faran’ny herinandro lasa teo ilay tranokala natokana ho an’ny fanatsarana fomba fiainana sy fanamboarana bika natsangan’i Arnold Schwarzenegger, LeBron James, Cindy Crawford ary Lindsey Vonn. “Ladder” no anaran’izy ity ka akora miisa efatra aloha amin’izao no mbola azo jifaina ao anatiny. Misy ny fanontaniana maromaro tsy maintsy valian’izay maniry ny hividy ireo vokatra mba ahafantarana ny toe-batana sy ahazoana vokatra tsara kokoa. Rinahsoa Cet article a été récupéré chez Jejoo
Jessica Alba, Lindsay Lohan…: mampiaraka ny mahasoa sy ny mahafinaritra
Na any am-pialan-tsasatra aza ireo olo-malaza dia tsy mbola mahafohy ny fanatanjahan-tena ihany. Mampiaraka ny mahasoa sy ny mahafinaritra izy ireo ary tsikaritra amin’ny bikany izany, rehefa manitsaka karipetra mena iny izy ireo. Efa mankafy fanatanjahan-tena hatramin’izay i Jessica Alba. Tsy iray ihany no fanazaran-tena ataony fa maro be. Rehefa fotoanan’ny fialan-tsasatra dia manararaotra indray izy manao fanatanjahan-tena ka ny “planche” no tena manavanana azy. Tsy mataho-drano koa raha i Gisèle Bundchen. Manararaotra ny fotoam-pialan-tsasatra izy, noho izany mba hanaovana “planche à voile”. Mampiasa faritra maro amin’ny vatana rahateo ity fanatanjahan-tena ity sady fialam-boly ihany koa. Manana ny fikafikany ihany koa i Lindsay Lohan, rehefa amin’ny fotoam-pialan-tsasatra iny. Tsy miala amin’ny “Jet ski” izy izay sady fialam-boly ho azy no fanarazan-tena ihany koa. Ny “canoe” kosa no manintona an’i Heidi Klum. Rehefa manararaotra ny fialan-tsasatra any Saint-Tropez iny izy dia ity fanatanjahan-tena ity no ataony mba hanatanjahany ny sandriny sy ny kibony. Rinahsoa Cet article a été récupéré chez Jejoo
MOZIKA MAODERINA :: Hampitselatra ny « electro-pop » etsy Analakely ry Rocky
Ao anatin’ny fitetezam-paritra amina firenena maromaro ny tarika Rocky, avy any Lille-Frantsa, amin’izao fotoana izao. Tsy ho diso anjara amin’ny zavakanto hoentin’izy ireo ny mpankafy mozika eto Madagasikara, indrindra ny eto an-drenivohitra. Anio, etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny fotoana hihaonana amin’izy ireo, ary indrindra hanokafana ny sofina sy ny fo amin’ny mozika entin’ny tarika, dia ny « électro-pop ». Mety ho vitsy ihany ny mahafantatra ny tarika Rocky, raha ny eto amintsika manokana. Niorina tamin’ny taona 2011 izy ireo. Ambaran’ny mpamakafaka eo amin’ny tontolon’ny mozika fa tarika tsy mitovy amin’iza na iza ny Rocky. Ahitana mpikambana efatra ny tarika ka iray ihany ny vehivavy, i Inès Kokou, manana feo miavaka amin’ny maro. Ny gadona lalaovin’izy ireo no tena isan’ny tanjany sy mampisongadina azy amin’ny tarika hafa. Marihina fa tafiditra ao anatin’ny ezaka fikarohana zava-baovao ataon’ny IFM ho an’ny Malagasy ny fandraisana ireto mpanakanto manana talenta miavaka ireto. L’article MOZIKA MAODERINA :: Hampitselatra ny « electro-pop » etsy Analakely ry Rocky est apparu en premier sur AoRaha.
Notanterahina tamin’ny 27 Novambra ny fitsarana ny raharaha mahakasika ilay didim-pananana navelan’i Johnny Hallyday
Tsiahivina fa tsy namela n’inona n’inona ho an’ireo zanany mihitsy izy, ao anatin’izany ka nangataka ny handova azy kosa ireo zanany. Nangataka ireto farany noho izany ny amin’ny tsy hanomezana an’i Laeticia ny 75% amin’ny tombom-barotra azo amin’ny famarotana ireo raki-kiran’i Johnny “Mon pays c’est l’amour” ka ho azy 4 mianadahy io 75% io ary ho an’i Laeticia kosa ny 25%. Cet article a été récupéré chez Jejoo
ROCKY (France) – Fampisehoana Electro pop – Fitetezana an’izao tontolo izao
Tsy misy tarika mitovy amin'i Rocky ankehitriny ary ny tarika Rocky dia tsy manampaharoa. Fitaovam-piadiana eny ambony sehatra izy nanomboka tamin'ny taona 2011 ary tsy miraharaha an'izay anaram-bosotra izay omena azy ny tarika. I Rocky dia tataran'ny mpinamana telo avy ao Lille (Frantsa), Olivier Bruggeman, Tom Devo ary i Laurent Paingault izay nifanena tamin'ny mpihira Inès Kokou izay Togoley. Ny feo maherin'i Inès Kokou dia mampahatsiahy an'i Dionne Warwick. Ny tarika Rocky dia tena Groove Machine izay fitambaran'ny soul, rock ary disco. Ny tarika Rocky dia mampiseho ny "Soul Divas" sy ny lazan'ny Dance Music izay nalaza tamin'ny taona 90. Ny album voalohany an'i Rocky dia "Soft Machine". Hanao fampisehoana ao amin'ny Albert Camus eo Analaky izy ireo ny zoma 30 Novambra 2018 amin'ny 07 ora hariva.
Mozika mavesatra: hanolotra « Revy rock » i Roova
Raikitra ! ny alin’ny zoma 31 novambra ho avy izao, eny amin’ny SK Melody Mandriambero Ambohidratrimo, hanolotra, alim-pikoranana (cabaret), hisalotra ny anarana “Revy rock” i Roova. Mpanakanto mandia ny faha-10 taona nivoizana ny mozika rock. Anisan’ny ahafantarana azy ilay hira “Ho anao irery ihany. Ankoatra an’i Roova, hovahinin’ny tovolahy eny an-toerana ihany koa ny tarika Green sy i Rheg ary Jeneraly. Hampiavaka ny fiarahana eny an-toerana ny hanoloran’ny tarika ireo vokatra kantony roa vaovao be. Ao koa ny kapila mangirana voalohany “Ho anao irery ihany”. Hirakitra sanganasa miisa 16. “Hira madinika hiresaka seha-piainana maro toy ny fitiavana, ny trangam-piainana andavan’andro, ny hatanorana, sns… sahaza ny rehetra no handrafitra ity kapila mangirana voalohany ity”, hoy i Roova. Anatin’ny kapila mangirana faharoa kosa no handraiketana ireo sanganasa voasokajy anatin’ny hira evanjelika. “Hafatra”, anarana hisaloran’ity vokatra faharoa ity, sanganasa mahatratra 16 ihany koa ao anatiny. Anisan’ny handrafitra ny fandaharan-kira, ny zoma izao, eny amin’ny SK Melody, ireo sanganasa voarakitra anatin’ireo kapila mangirana roa ireo. Hanatevina izany ihany koa ny hivazoan’i Roova ireo hiran’ny mpanakanto vahiny. “Lamina vaovao sy fomba fiasa hoentina miady amin’ny piraty ny hizarana maimaimpoana amin’ireo mpankafy ny vokatra”, hoy i Roova. Hisy ihany koa fomba fiasa hapetraka iarahana amin’ireo foiben-tserasera eto an-dRenivohitra sy manerana ny Nosy ho amin’ny fampahafantarana azy ireo ho an ’ny mpankafy. Tsiahivina fa efa manana ireo foto-drafitrasa ho amin’ny fikirakirana ny mozika i Roova. Tsongaina amin’ireny ny efitrano fandraisam-peo sy ny fanaovana famerenana ary ireo fitaovana hiaka faran’ny teknolojia ho amin’ny famokarana rakipeo. Nanangona: HaRy RazafindrakotoL’article Mozika mavesatra: hanolotra « Revy rock » i Roova a été récupéré chez Newsmada.
TOVO JHAY en Live, fampisehoana tsy fahita …
Fampisehoana tsy fahita ataon'i Tovo J'hay ny Alahady 02 Desambra 2018 amin'ny 02 ora tolak'andro ao amin'ny American Center eny amin'ny Jumbo Smart Tanjombato. Raha mila fanazavana fanampiny dia mijereva ny pejy Facebook-ny Tovo J'hay.
Betsaka ireo olo-malaza niezaka nitady lalana mba hahatrarana ny tanjony. Misy amin’izy ireo no nanomboka avy hatrany tany anatin’ireny fifaninana madinika ireny saingy efa tonga malaza indrindra eran-tany, amin’izao fotoana. Voalohany amin’izany i Beyoncé. Tany anaty fifaninanan-kira no niandohany, fony izy mbola niaraka tamin’ny tarika “Destiny’s child”. Fifaninana “star search” no nandraisan’izy ireo anjara ary mbola “Girl’s Tyme” no anaran’ny tarika, tamin’izany. Mialohan’ny nandraisan’i Nicole Scherzinger ny tarika “Pussycat Dolls” dia nandray anjara tamin’ilay fifaninana “Popstars” izy . Nandresy izy, tao anatin’izany fifaninana izany satria izy no “lead” tao amin’ilay tarika “Eden’s Crush”. Toa an’i Lucy Hale, izay mpilalao sarimihetsika fantatra tao anatin’ilay andian-tantara “Pretty Little Liars” dia efa nanandrana nandray anjara tamina fifaninanan-kira ihany koa i Janel Parrish. Tao anatin’ilay fifaninana “American Juniors” izy no nilalao saingy tsy voaray. Isan’ireo nitady lalana tany amin’ny tontolon’ny mozika koa i Emma Stone vao tonga eo amin’ny toerana misy azy amin’izao fotoana. Tao anatin’ilay fifaninana “In Search of the Partridge Family » no nahitana azy voalohany vao nahazo ireo anjara asa tao anatin’ireny horonan-tsary toa an’i “The Amazing spiderman” sy “La la land” ireny izy. Rinahsoa Cet article a été récupéré chez Jejoo
ARTISTA ZOKINY SY ZANDRINY :: Hiray sehatra etsy Anosy i Samoëla sy Rak Roots
Mpanakanto roa samy manana ny vanim-potoana niandohany nefa samy manana ny lazany. Hiara-dia amin’ny seho takariva iray hotanterahina, etsy amin’ny Carlton Anosy, ny zoma ho avy izao i Samoëla sy Rak Roots. Raha efa nanana ny lazany teo amin’ny tontolon’ny vazo miteny efa ho roa amby roapolo taona i Samoëla, dia anisan’ireo mpanakanto zandriny nahay nametraka ny maha izy azy, vao taona vitsivitsy izay i Rak Roots. Tafiditra ao anatin’ny fiatrehana ny fivoriamben’ny YMCA, na ny Fikambanan’ny tanora Kristianina eto Madagasikara ny hetsika ary mifanandrify ihany koa amin’ny fankalazana ny foara ara-toekarena, sôsialy ary teknôlôjian’ny tanora. Samy hiezaka ny haneho ny talentany amin’ireo tanora ho avy amin’io hetsika io, na i Samoëla, na i Rak Roots. Hofintinin’i Samoëla mandritra ny ampaham-potoanany ireo rakikira rehetra navoakany tao anatin’izay roapolo taona mahery izay, ary tafiditra ao anatin’izany ny rakikira farany « Radio-n’Ambanivolo », izay ahitana ireo hira nalaza taty aoriana toy ny « Izy irery », « Hiverina »… Ho an’i Rak Roots kosa, dia fotoana hiangaliany indray ireo hira vaovao mbola tsy tena hain’ny rehetra, nefa kosa hanomezana fahafaham-po amin’ireo hirany efa nalaza io fampisehoana io. Anisan’ireo nahafantarana an’i Rak Roots ny « Ilay silako », « Maka tsy taitra »… L’article ARTISTA ZOKINY SY ZANDRINY :: Hiray sehatra etsy Anosy i Samoëla sy Rak Roots est apparu en premier sur AoRaha.
Ben Affleck sy Jennifer Garner : misy fiainana ao aorinan’ny fisarahana
Ny ray aman-drenin'i Violet, Seraphina ary i Samuel dia nahavita nitazona ny fiainam-pianakaviany na dia nisy aza ny fisarahana hoy i "People" Ny fisarahan'i Ben Affleck sy Jennifer Garner izay nambara tamin'ny taona 2015 dia tsy nanimba ny fianakavian'izy ireo. Raha nambara am-pahibemaso fa nisraka izy ireo nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Novambra, dia afaka nifanaraka ihany ny ray aman-drenin'i Samuel, Seraphina, Violet raha ny voalazan'i People. Ny iray amin'ireo namany izay notenin'i People dia milaza fa "Jen sy Ben dia miara miasa mba hanatanterahan'izy ireo ny asany amin'ny maha ray aman-dreny azy ireo". "Tian'izy ireo ny manao zavatra miaraka, na ny mivoaka izany, na ny mandeha miangona, ny mahandro sakafo na ny mijery films", izay no nanampian'ity namany ity an'ny zavatra nambarany. "Nisy ambony nisy ambany teo amin'ny fiainan'izy ireo tamin'ity taona ity fa ohatran'ny milamina tsara izy ireo". Tamin'ity herinandro ity, dia Jennifer Garner sy i Ben Affleck dia niaraka nanao "Thanksgiving" niaraka tamin'ny zanany tany Montana raha ny filazan'i boky "People" azy. I Ben Affleck dia miady amin'ny fisotroan-taoka" I Ben Affleck dia mandalo fotoan-tsarotra tamin'ity taona ity. Nilaza izy tamin'ny loataona teo ny ady ataony amin'ny fisotroan-taoka. "Miady ny amin'ny fahazarana misotro taoka dia ady tena sarotra ary mandriatra ny andro iainana izany. Noho izany, dia tsy afaka milaza isika hoe mbola miady ve sa tsia. Tsy maintsy miady isan'andro amin'io fahazarana io", izay no nambaranay tao amin'ny Instagram. I Jennifer Garner kosa dia miaraka amin'ny olonkafa izay nambara tamin'ny faran'ny volana oktobra teo. Ilay mpilalao sary mihetsika izay 46 taona dia miaraka amin'i John Miller, izay mpandraharaha. I Jennifer Garner dia mbola tsy miteny hoe sipany i John Miller raha ny voaloazan'i People. Kanefa dia hita hoe sambatra i Jennifer Garner amin'izao ary miala voly be mihitsy. I Ben Affleck dia nilaza tamin'ny namany iray fa tsy manana olana ny amin'io fiarahana io.
Cuisine - People - Jejoo
Ry Blake Lively, Nikki Reed…sy ny nahandro
Maro ireo olo-malaza no mankafy mahandro. Tsy tena fahazaran’izy ireo ny manao izany indraindray, noho izy ireo manana mpiasa manokana efa matihanina momba ny lakozia. Voatery ihany anefa ny sasany, noho ny fiaraha-miasa amin’ireo mpanohana azy, na mba entina hampivoarana ny zavatra ataony. I Geri Halliwell izay nanjary lasa nanoratra boky momba ny nahandro ho an’ny ankizy. Matetika ihany koa izy no mizara horonan-tsary fohy ho fampianarana fomba fahandroana sakafo na hizarana ny fikarakarany sakafo. Isan’ny tia mahandro ho an’ny Ryan Reynolds, vadiny sy ny zanak’izy ireo roa koa i Blake Lively. Mahaliana azy tanteraka ny fandrahoana sakafo ka efa nianatra nahandro niaraka tamin’ilay mpahandro matihanina tera-tany frantsay, Franck Poupard ao Parisy mihitsy izy. I Gwyneth Paltrow moa dia nanoratra boky momba ny sakafo voalanjalanja sy ara-pahasalamana tanteraka. Nanokatra “blog” izy, nampitondrainy ny anarana hoe “Goop” ka mizara sakafo sy torohevitra mahomby ary mahasalama ao amin’io pejy io. Mizara matetika ny akora ampiasainy rehefa mahandro i Nikki Reed, vadin’i Ian Somerhalder, fantatra tao anatin’ilay horonan-tsary “Vampire Diaries”. Zarainy amin’ireo mpanaraka azy ny sarin’ireo akora tena tsy maintsy misy ao aminy, toy ny lait d’amande, ny voa (voam-boatavo, sesame…). Ny fomba mahomby indrindra ahafantarana izay ao anatin’ny sakafo hanina hoy izy dia ny fikarakarana izany. Rinahsoa Cet article a été récupéré chez http://jejooweb.net/pages/modules.php?id=21347&idcat=3
Foot - News - People - Sport - News Mada
Kitra: tsy hiakatra kianja intsony i Drogba
Nanapa-kevitra ny tsy hilalao baolina intsony ilay Ivoarianina, i Didier Drogba. Feno 40 taona katroka ny lehilahy ankehitriny. Ny famaranana teo amin’ny “USL Cup”, natao tany Louisville, Etazonia, ny fihaonana farany natrehiny amin’ny maha mpilalao matihanina azy, ny 9 novambra lasa teo. Lalao ho an’ny faritra avaratr’i Amerika. Marihina fa anisan’ireo mpilalao afrikanina dimy na enina mendrika sy nisongadina indrindra ny lehilahy. Anisan’ny nampamiratra azy ny filalaovany tao amin’ny Chelsea, nandrombahany ny “Ligue des champions”, ny taona 2011 – 2012. Ankoatra izay, efa maro ireo anaram-boninahitra azony, toy ny tompondakan’i Angletera, ny “FA Cup”, ny “Football league cup”. Taorian’ny tsy nilalaovany intsony tao amin’ny Chelsea, efa tany Sina sy tany Torkia ny lehilahy. Namaranany izany ny tany Kanadà sy ny tany Amerika. Tsy latsa-danja amin’izany koa ny niarahany tamin’ny Elefanta na ny ekipam-pirenen’i Côte d’Ivoire. Na teo aza anefa izany, tsy mbola nahazo ny “Can” mihitsy i Drogba. Mpilalao fantatry ny Malagasy tsara i Drogba satria efa tonga teto Madagasikara ary nifanandrina tamin’ny Barea, teo amin’ny fiadian-toerana ho an’ny “Can 2011”. Betsaka ihany koa ireo mpijery malagasy mankafy ny fomba filalaon’i Didier Drogba. Tompondaka L’article Kitra: tsy hiakatra kianja intsony i Drogba a été récupéré chez Newsmada.
Katy Perry no mpihira nahazo vola be indrindra tamin’ny 2018
Katy Perry dia nanana taona feno fahombiazana araky ny nambaran’ny Forbes izay mandahatra isan-taona lisitra maromaro momba ireo mpanam-bola eran-tany, i Katy Perry izany dia nahaangona tsy latsaky ny 83 millions de dollars ho an’ny taona 2018 (ny vanim-potoana hanaovana ny kaonty dia eo anelanelan’ny Jona 2017 sy Jona 2018). Nandray 1 millions de dollars isaky ny fampisehoana ataony izy amin’ny tournée Witness, ary nahazo ihany koa 25 millions de dollars amin’ny fandraisany anjara amin’ny mpitsara American Idol. Aoaoriany kely dia i Taylor Swift, izay ny raki-kira Reputation dia anisan’ny tsara fiandohana indrindra tamin’ity taona ity. Ilay mpihira an’i Shake It Off dia mety ho voalohany amin’ny lisitra mihitsy raha nampidirina tao amin’ny isa ireo ampisehoana rehetra tamin’ny tournée-ny natomboka tamin’ny volana mai 2018. Eo amin’ny toerana fahatelo dia hitantsika i Beyonce, miaraka amin’ny 60 millions de dollars, beyonce izay nanomboka ny On The Run Tour II tamin’ny 6 jona.
c 20 novembre 2018
Ireo olo-malaza 10 izay tsy mendrika ny maha olo-malaza azy
Ito dia misy ny lisitra an'ireo olo-malaza 10 izy tsy mendrika ny maha olo-malaza azy ... arak'ilay chaine Youtube "Watch Mojo". Iza avy ary izy ireo ? i Nabila ve ? sa i Chris Brown ? sa i Zahia ? Jereo ity video iray ity dia ho hitantsika ao izy 10 mianadahy.
MPANAKANTO TERA-BAO :: Nahazo zazalahikely i Meizah sy Riana
Nomen’Andriamanitra ny fara. Niteraka ny zanany voalohany Rabelionintsoa Mandasoa Fanomezana, fantatra amin’ny anarana mpanakanto hoe Meizah. Rehefa ela niandrasana izy mivady dia ny zoma tamin’ny 10 ora sy sasany maraina teo no tonga teto an-tany ny zazalahikely, Raphaël Valimpitia Rabelionintsoa. “Tsy dia mahita zavatra holazaina aho fa tena faly ny foko. Misaotra ireo namana tsy nahafoy. Misaotra ireo izay nikarakara anay rehetra ary misaotra ireo tonga namangy sy izay mbola ho avy”, hoy i Meizah milaza ny fihetseham-pony. Nandritra ireo sivy volana nitondrany vohoka dia tsy nitsahatra nizara ny dingana rehetra nolalovany, tany anaty tambajotra sôsialy i Meizah mivady, ary vao teraka izy dia nizara ny hafaliany tamin’ ireo mpanaraka azy, niaraka tamin’i Riana, vadiny. Tsara ny mampahatsiahy fa tamin’ny 19 aogositra 2017 no vita raharaha i Meizah mivady. Herintaona aty aoriana vonona ny niatrika fiterahana izy mivady. Hatramin’ny nahatongavan’ ity vahinin’i Meizah dia sesilahy ny firarian-tsoa ataon’ireo mpankafy azy ao amin’ny tambajotran-tserasera “Facebook”. L’article MPANAKANTO TERA-BAO :: Nahazo zazalahikely i Meizah sy Riana est apparu en premier sur AoRaha.
Cinéma - News - People - séries
Grey’s Anatomy : mpilalao iray nanambady
Raha ireo olona lalaovina ao amin'ilay sérieo Grey's Anatomy io no sahirana amin'ny fitadiavana ny fitiavana, dia tsy izany no zava-mitranga ho an'ireo mpilalao azy. Mpilalao sarimihetsika iray ao amin'io série izao no nanao "eny" amin'ilay silaky ny ainy. Nisy tokoa ny fifankatiavana teo amin'ny série Grey's Anatomy, satria ny mpilalao iray ao amin'ny sarimihetsika izay noforonon'i Shonda Rhimes dia nanambady ny andefomandriny. I Chris Carmack izany alias Atticus Lincoln. 37 taona izy io ary efa hita teo amin'ny série maro hafa toy ny "Desperate Housewives" ka nilalao an'i Tim izy tao. Nilalao tao amin'i série "Les Experts : Miami" tamin'ny 2007 ihany koa izy. Roa taona taty aoriana dia nilalao tao amin'ny "Drop Dead Diva" izy. Raha teo amin'ny asany dia betsaka ny tetikasan'i Chris Carmack. Io mpilalao sarimihetsika io dia sambatra eo amin'ny fitiavana. Ny 20 oktobra teo, dia nizara sary anankiroa ny mariaziny sy i Erin Slaver ny olona niaraka aminy taona maro. Nahazo zazavavy izy ireo tamin'ny 30 Aogositra 2016. Surnommé « Le Dieu de l’ortho », le personnage de Link est devenu incontournable dans la quinzième saison inédite de Grey’s Anatomy. En tant que chirurgien orthopédique, il est aussi indispensable pour le bon fonctionnement du Grey Sloan Memorial Hospital. Un nouveau personnage qui bouleverse aussi le quotidien de l’héroïne Meredith Grey jouée par Ellen Pompeo. Retenez donc bien le nom de Chris Carmack. Il devrait surprendre les téléspectateurs ! Nantsoina hoe "Le Dieu de l'ortho", Link ilay olona nolalaoviny dia tena tsy azo nihodivirana tao amin'ilay saison 15 an'i Grey's Anatomy. Ankoatran'ny maha "chirurgien orthopédique" azy dia nilaina tokoa izy ny amin'ny fandehanan'i Grey Sloan Memorial Hospital. I Link dia nampisavoaravoara ny andrompianan'i Meredith Grey izay lalaovin'i Ellen Pompeo. Tadidio tsara ary ny anaran'i Chris Carmack.
Te ho mpihira ny zanak’i Prince Albert II
Ny zanaka vavy matoan’i prince Albert II de Monaco (26 ans), dia mihezika ny ho tafavoaka amin’ny fihirana. Talenta izay nampiarahany amin’ny fandraisany anjara amin’ny fanampiana nymahantra tamin’ny gala fanangonam-bola tany New York, tamin’ny alarobia hariva teo. Ny zanaky ny prince Albert II dia nahita fomba hampiarahana ny zavatra roa tiany indrindra : ny hira sy ny fanampiana ny olona. Ny Alarobia 14 novambra 2018, Jazmin Grace Grimaldi dia nandray anjara tamin’ny andiany faha 8 amin’ny Better World Awards notontosaina tany New York. Fotoana nahafahan’ilay tovovavy hampiseho ny talentany eo amin’ny hira. Satria izy mihetsiketsika be eo amin’ny tamba-jotra sosialy, ilay amerikana 26 taona dia nizara tamin’ireo mpanaraka azy amin’ny Instagram ampahany tamin’ny famerenan-kiray. « Andeha ihira ny hira roa noforoniko aho miaraka amin’i Jose Feliciano ! (...) ny vola azo rehetra amin’io Gala io dia homena an’ny Wells of Life, fikambanana fanampiana izay manome rano madio ho an’ireo mponina any ambanivohitr’i Ouganda, any Afrika », hoy izy. Tamin’ny Oktôbra farany teo, ilay sipan’i Ian Mellencamp dia efa niresaka momba ny fitiavany mihira : « vao manomboka mihitsy aho eo amin’ny sehatry ny cinema sy ny hira. Tiako ny miasa, indrindra manao izay tiako. Maniry ny hamoaka ny Single voalohany aho amin’ny Novambra miaraka amin’ny Clip. Efa nilalao sarimihetsika voalohany koa aho tamin’ity lohataona ity. Cicada no lohatenin’ilay oronan-tsary. » Jazmin Grace Grimaldi dia zanaka vavimatoan’i prince Albert II. Teraka ivelan’ny fanambadiana izy tamin’y taona 1992, tamin’y fiarahan’ny rainy niaraka tamin’i Tamara Rotolo, taty aoriana tamin’ny 2006 vao neken’i Albert ho zanaka izy. Hatramin’izay izy dia milaza fa akaikin’i Monaco sy ireo mpikambana amin’ny fianakaviana andriana any, indrindra fa i Pauline Ducruet izay niara nanao Rallye Aïcha des Gazelles niaraka taminy tamin’ny volana Martsa farany teo.
Meghan Markle dia milalao comédie miaraka amin’i Printsy Harry
Ny mpijery ny fandaharana "The Loose Women" dia tohana tamin'ny nambaran'ilay mpilalao sary mihetsika anglisy Nadia Sawalha. Nanambara izy mantsy fa Meghan Markle dia milalao ny "fampisehoan'ny fiainany" nanomboka tamin'ny nidirany tao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka anglisy. Samy mahalala isika rehetra fa i Meghan Markle dia mpilalao sarimihetsika mahay, ary ho an'ny sasany dia milalao ihany koa izy eo amin'ny fianany andavan'andro. Izay aloha no heritreretan'i Nadia Sawalha, mpilalao sarimihetsika sy mpanolotra fandaharana anglisy. Tao amin'ny fandaharana "The Loose Women" tamin'ny fotoanan'ny fanehoan-kevitra ny sarin'ny faha 70 taonan'ny printsy Charles, tena niala vokona mihitsy izy tamin'ny vadin'ny printsy Harry. "Ohatran'ny tony tsara tokoa izy zany e ?", izay aloha no nanontanian'ilay mpanao gazety. Namaly tsy nihambahamba i Nadia Sawalha nanao hoe "Mampanontany tena ahy izy. Miahiahy aho. Mandinika azy aho." Nanampy izy avy eo hoe : "Miheritreritra aho fa mety ho io no fampisehoan'ny fiainany. Io no rôle lehibe indrindra ho azy". Hoy ihany koa izy hoe Meghan Markle dia tsy natoraly mihitsy tao aorinan'ny mariaziny niaraka tamin'ny printsy Harry ny 19 May teo. Nanohana ny olona rehetra tokoa ny zavatra nolazainy. Tao amin'ny Twitter dia maro tokoa ny nanambara fa tena sosotra tamin'io fanambarana io.y Fa mbola nanampy i Nadia Sawalha momba ny tokantranon'i Meghan Markle sy ny printsy Harry hoe : "Mahafatifaty tokoa izy ireo ary tena mifankatia tokoa, azo antoka izany. Fa izaho miheritreritra hoe matahoatra azy izy." Ary nanazava izy avy eo hoe : "Satria izy (Meghan Markle) dia zokony 5 taona, manana traikefa kokoa izy". Fa ho an'i Nadia Sawalha, io fihetsehampo dia zavatra tsara tokoa. "Izaho miheritreritra fa tiany izany, mihevitra aho fa tiany ny mankafy azy", izay no namaranan'ilay mpilalao ary mihetsika anglisy. "Mihevitra aho fa tiany tokoa hoe izy no star an'ilay sarimihetsika". Lahatsoratra nalaina avy amin'ny :